Hafatra An-Dahatsoratra Ve No Nitarika Ny Fisamborana Ilay Gadra Iraniana-Amerikana Navotsotra Vao Haingana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Janoary 2016 13:18 GMT
Nivoaka tao amin'ny tati-baovao mahaleotena IranWire ny antsipirihan'ny fisamborana ilay Iraniana-Amerikana Nosratollah Khosravi-Roodsari, ny olona fahaefatra navotsotra tamin'ny fifanakalozana gadra tamin'ny 18 janoary eo amin'i Iran sy i Etazonia.
Ny gadra, izay tsy dia fantatra loatra raha oharina amin'i Jason Rezaian mpanao gazetin'i Washington Post, Amir Hekmati miaramilan'ny tafika an-habakabak'i Etazonia taloha ary ny pastora Saeed Abedini, dia heverina ho nosamborina noho ny fanaraha-maso ny daholobe ataon'ny manampahefana Iraniana amin'ny SMS.
Efa nifanaovana talohan'ny fanesorana ny fanasaziana ara-toekarena an'i Iran naharitra taona maro, tafiditra anatin'ilay fifanarahana ara-nokleary manantantara [mg] tamin'ny 18 janoary teo amin'i Iran sy i Etazonia, tamin'ny volana jolay tamin'ny herintaona ny fifanakalozana gadra teo amin'ny roa tonta.
Tamin'ny alalan'ny antsafa nifanaovana tamin'ny fianakavian'i Khosravi-Roodsari sy ireo niray efitrano taminy tao am-ponja no nanazavan'ny IranWire:
Tranga iray hafa azo marihana amin'ny fanangonana tahirinkevitra mitarika mankany amin'ny fisamborana ny raharaha Isa Saharkhiz tamin'ny 2009, izay niafina tamin'ny manampahefana noho ny fandraisany anjara tamin'ny Hetsika Maitso.
Na ny lalampanorenana na ny lalàna ady heloka bevava ao Iran dia samy manandratra ny zon'ny olompirenena manoloana ny fanaraha-maso tsy ara-dalàna. Jereo ny Andininy faha-25 amin'ny Lalampanorenana sy ny Andininy faha-104 amin'ny fehezan-dalàna ady heloka bevava ao Iran.